IMalawi Ivulekele Ukuhambela Amazwe Ngamazwe
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Ezihlukahlukene » IMalawi Ivulekele Ukuhambela Amazwe Ngamazwe
Isikhumulo sezindiza samazwe omhlaba saseKamuzu eMalawi sivulelwe ukuhweba ngamabhanoyi kusukela ngoSepthemba 1, 2020. Isibalo esilinganiselwe sezindiza esivunyelwe ukusebenza okokuqala ukwenzeka ngoSepthemba 5.
Bonke abagibeli abafikayo eRiphabhulikhi yaseMalawi kudingeka ukuthi bakhiphe isitifiketi esingesihle sokuhlolwa kwe-SARS Cov-2 PCR esitholwe zingakapheli izinsuku eziyi-10 ngaphambi kokufika eMalawi. Noma yimuphi umgibeli ongenaso isitifiketi esishiwo uzonqatshelwa ukungena.
Abagibeli abafikayo kuzodingeka nokuthi baqhubeke nokuzihlukanisa bodwa izinsuku eziyi-14 lapho bezolandelwa ngabaphathi bezempilo.
Abagibeli kungadingeka ukuthi banikeze amasampula wokuhlolwa kwe-COVID-19. Amasampula azoqoqwa esikhumulweni sezindiza futhi imiphumela yokuhlolwa izokwaziswa abathintekayo kungakapheli amahora angama-48. Noma yibaphi abagibeli abanezimpawu bazophathwa ngokuya ngemikhombandlela ethile ebekwe abaphathi bezempilo.
Abahambi kumele bagcwalise futhi bahambise Amafomu Wokuqapha Ukuhamba (TSF) azotholakala ezindizeni ezigibele noma esakhiweni sezindiza esikhumulweni sezindiza. Amafomu azonikezwa abasebenzi bezempilo abasesakhiweni sokugcina.
Bonke abahambi nabahlinzeka ngezinsizakalo kudingeka babheke imigomo yokulawula ukutheleleka njengokuqhela komphakathi, ukugeza izandla nokuhlanza, nokugqoka izifihla-buso zobuso lapho kudingeka. Ukushisa komzimba kuzophinde kuhlolwe ezindaweni ezahlukahlukene zamasu.
Izakhamizi zase-US ezifuna ukufaka isicelo sokunwetshwa kwama-visa noma ukunwetshwa kwemvume yokuhlala zingavakashela noma yiliphi ihhovisi eliseduzane laseMalawi lokufaka izicelo. Ngeminye imininingwane, vakashela iwebhusayithi yeMalawi Immigration: https://www.immigration.gov.mw/
Akunasikhathi esibekelwe ukubekwa ekhaya futhi akukho mingcele ekuhambeni kwamazwe noma ukuhamba kwamanye amazwe. Izinketho zokuhamba zomphakathi zikhawulelwe ngokweqile eMalawi. Lokho okusebenzayo ngamabhasi amancane aphethwe ngasese, amatekisi ahlanganisiwe wesithuthuthu namatekisi amabhayisikili. Amabhasi kulindeleke ukuthi anciphise abagibeli futhi adinge ukusetshenziswa kwemaski nokuqhelelana okuthile kwezenhlalo.
Imikhosi, imicimbi yezemidlalo, neminye imisebenzi emikhulu enabantu abangaphezu kwe-10 ivinjelwe ukukhululwa kwezinkonzo nemingcwabo. Lezi zinsizakalo ezimbili zakamuva zingaba nabantu ababalelwa kwabangu-50 uma abantu behambisana nemikhawulo yebanga lomphakathi kanye nezinyathelo zenhlanzeko.
Izitolo zokudla okusheshayo, izindawo zokudlela, nezindawo zokudla zomphakathi zivaliwe ngaphandle kwezinsizakalo zokususa. UHulumeni waseMalawi uphinde wafaka imithetho eyenza ukugqoka isifihla-buso ebusweni kuzo zonke izindawo zomphakathi kuphoqeleke, futhi labo abangayilandeli le mihlahlandlela bangahlawuliswa. Kunenhlawulo ye-10,000 MWK (US $ 13) uma noma ngubani ehluleka ukuhambisana nemithetho kaHulumeni waseMalawi maqondana nemikhawulo yokuphambana nomphakathi kanye nokugqokwa kwesibopho sobuso.
EMalawi, kunamacala angu-5,576 19 aqinisekisiwe e-COVID-3,420 ezweni lonke njengoba kuneziguli ezingama-175 ezitholakale kanye nokufa okuhlobene okuyi-1 kusukela ngoSepthemba 2020, XNUMX. Uhulumeni waseMalawi useqalise izindlela zokunqanda ukubhebhetheka kwaleli gciwane.
Airport Covid-19 Uhulumeni Malawi Office
Thola Imikhuba Yesiginesha yaseSt. Regis San Francisco evela Ekhaya
Isikhulu esiphezulu seDelta Air Lines: Azikho izintambo zokuzibandakanya e-US
I-Air Astana yaseKazakhstan ikhansela zonke izindiza eziya futhi...
Ithimba Le-Barbados Lishaya I-Ground Running e-WTM LATAM
I-$100M yokuthuthukisa Ukwelashwa Kwama-Antibody Okunzima Nokungavamile...
Abesifazane bangabashayeli abasha abahlonishwayo eSkal...
Indlela entsha yokundiza: I-American Airlines ithatha indawo yezindiza...
I-Duesseldorf Airport Chaos isiyisiqalo nje: Usizo...